Ry malala malala, ankehitriny mihoatra ny tokony ho izy, amin'izao fotoanan'ny filana izao, ny fifanohananana dia samy lasa iraka ho antsika. Miara-mandroso isika miaraka amin'ny faharetana sy fahatokisana manoloana ny tsy fahatokisana. Rehefa miezaka mafy miaro ny fahasalamana sy tsara ho an'ny tenantsika izahay dia te-hizara ny fomba fanaontsika mba hisorohana ...Hamaky bebe kokoa »
Salama, rehetra, misy vaovao tsara ho anay roa sy ianao, namolavola fomba roa vaovao postur corrector-smart posture corrector. Sary ho an'ny firesahana ho anao, ...Hamaky bebe kokoa »
Araka ny antontan'isa, isan-taona dia misy marary marary 1,1-1,8 tapitrisa, 400000-800000 maty isan-taona ary 86,5% ny tsy fahampiana. Araka ny antontan'isa nataon'ny manam-pahaizana sasany, ao anatin'ireo marary marobe sisa velona, ​​ny 10% no niverina mba hiasa nefa tsy kilema mazava, 40% no namela kilema kely, 40 ...Hamaky bebe kokoa »
Salama, azafady, misy vaovao iray ho anay sy ianao roa lahy, namolavola fanitsiana fomba roa samy hafa izahay. Sary ho an'ny firesahana ho anao, ...Hamaky bebe kokoa »
Fankalazana-fiaraha-miasa amin'ny orinasa RUKANG ho an'ny seza misy kodiarana sy mpandehandeha
Mankalazà am-pitiavana ny fiaraha-miasa ho an'ny mpitsabo any Hongzhu sy Rukang mba hanao sonia ny fifanarahana amin'ny famokarana seza misy seza. Ny mpitarika avy amin'ny andaniny roa dia Atoa Yang sy Andriamatoa Lv manatrika izany ary mampanantena fa hiezaka ny hanohana ny fifanarahana amin'ny fomba mahomby izy ireo. Manomboka izao, Hongzhu fitsaboana dia afaka mamatsy kodiarana ...Hamaky bebe kokoa »
Vokatra vaovao tonga-tsy mitanila lumbar brace
Salama, rehetra, misy vaovao tsara ho antsika rehetra, namolavola ny famafazana lumbar Inflatable. Misy loko 2 hisafidianana. Sary ho an'ny fanamarihana ataonao, ireto no vokatra vaovao ananantsika, tena mahazo aina rehefa mitafy, ary tena mandaitra amin'ny famoahana ny fanaintainan'ny valahany. Ny fantsom-baravarankely azo ampiasaina dia ...Hamaky bebe kokoa »
Vokatra vaovao tonga amin'ny fitaovana be traction eo amin'ny vozony
Salama, azafady, misy vaovao iray ho antsika rehetra, namolavola fitaovana traction an'ny hatoka malefaka. Misy loko 4 hisafidianana. Sary ho an'ny fanamarihana ataonao ho, Ity no vokatra vaovao ananantsika, tena mahazo aina izy rehefa mitafy ary tena mandaitra amin'ny famoahana ny fanaintainan'ny vozony. Therapeutic effec ...Hamaky bebe kokoa »
Salama, azafady, misy vaovao iray ho antsika rehetra, namolavola fitaovana traction an'ny hatoka malefaka. Misy loko 4 hisafidianana. Sary ho an'ny firesahana ho, Hamaky bebe kokoa »
Salama, azafady, misy vaovao iray ho anay sy ianao roa lahy, namolavola fanitsiana fomba roa samy hafa izahay. Sary ho an'ny fanamarihana ataonao ho, Ity no vokatra vaovao ananantsika, tena mahazo aina izy rehefa mitafy ary tena mahomby amin'ny mpanitsy posture. Mino aho fa misy hazava aminao: ao amin'ny h ...Hamaky bebe kokoa »
Endri-javatra 7 fiarovana ny vohoka vehivavy (2)
Tohizo ny Faharoa, ny fanaovana fehin-kibo dia manana tohana sy fiasa azo antoka. Ny fametahana tadina mifanentana dia afaka mamindra ny ampahany amin'ny lanjan'ny vatana ambony amin'ny alàlan'ny taolan-tehezana iliac tulang. Ny hery mamatotra sy ny hozatry ny kibony mihanaka amin'ny alàlan'ny lohalika.Hamaky bebe kokoa »
Toetrany 7 fiarovana ny valahany
Ny Fanohanana Lumbar dia mihamaro hatrany amin'ny vehivavy sedentary, satria ny vehivavy voan'ny fadimbolana, ny fitondrana vohoka, ny fiterahana, ny fampinonoana ary ny toe-batana hafa, ary manana ny toetran'ny aretina gynecological, ka ny fanaintainana ambany aoriana dia soritr'aretina mahazatra. Ka ahoana no hiarovana ny valahinay ...Hamaky bebe kokoa »
Ny andraikitry ny vozon'ny tranon-jaza amin'ny tratran'ny tenda ary ny fomba hanamaivanana ny fanaintainan'ny tendany
Ny mpiasa fotsy sy fotsy tazo dia mihazona ny lohany mandritra ny fotoana maharitra, izay mahatonga ny hozatra ao ambadiky ny hatony ho tafahoatra, ary hanery ny vazivazy rehetra amin'ny taolam-patin'ny vozon-tranonjaza. Rehefa ela dia mitarika ny kapila an-tendrony (vertebrae cervical) hianjera, hiteraka c ...Hamaky bebe kokoa »